काठमाडौं। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। चीनले हालसम्म छ स्वर्ण, एक रजत र चार कास्यसहित ११ पदक प्राप्त गरेको छ।
प्रतियोगितामा जापान दोस्रो तथा अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। जापानले हालसम्म पाँच स्वर्ण र एक रजत तथा अमेरिकाले चार स्वर्ण, दुई रजत र चार कास्य प्रदक प्राप्त गरेको छ। यस्तै दुई स्वर्ण र तीन कास्यसहित कोरिया चौथो तथा एक स्वर्ण, चार रजत र दुई कास्य पदक प्राप्त गर्दै रसियन ओलम्पिक कमिटी पदक तालिकाको पाँचौँ स्थानमा रहेको छ।
यसैगरी इटाली, अस्टे«लिया, फ्रान्स, हङ्गेरी, ट्युनिसिया, अस्ट्रिया, इक्वेडर, इरान, कोसोभो, नर्वे, थाइल्याण्ड र उज्बेकिस्तानले एक एक स्वर्ण जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी २०५ देशमध्ये हालसम्म ४२ देशले पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
नेपालबाट चार खेलमा पाँच खेलाडी टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी भएका छन्। तीमध्ये सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्टले खेलिसकेका छन्। दुवै जना पराजित भइसकेका छन्। परियारले महिला १० मिटर एयर राइफलमा तथा भट्टले महिला ४८ किलो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
टोकियो ओलम्पिकमा अब पौडीका गौरिका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। सिंहले महिला १०० मिटर फ्रि स्टाइल, शाहले पुरुष १०० मिटर फ्रि स्टाइल तथा चौधरीले महिला १०० मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। शाहले मङ्गलबार, सिंहले बुधबार तथा चौधरीले शुक्रबार आ–आफ्नो खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। रासस
महिला एसियन कप छनोट : नेपाल र फिलिपिन्स भिड्दै
विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : ओमानसँग हार्यो नेपालले
ओमानविरुद्धको क्रिकेटमा नेपालको कमजोर ब्याटिङ्ग प्रदर्शन
ढुक्क हुनुहोस् गठबन्धन टुट्दैन : प्रचण्ड
बागमती र प्रदेश १ मा एक महिनाभित्रै नयाँ सरकार बनाउँछौं : झाँक्री
अनेरास्ववियूको नयाँ समिति, क-कसले पाए जिम्मेवारी ?
पदलोलुप केही व्यक्तिले भ्रम फैलाउन खोजे : नेराकस
सरकारका ६० दिन : यी हुन् नागरिकको मन जित्ने सरकारका ८ काम
संसद विघटन प्रतिनिधिसभाले मात्रै गर्ने हुनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
एकीकृत समाजवादीले बगमती सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ : शाक्य
कर्मचारीले पार्टी हेर्ने होइन, सरकारलाई सहयोग गर्ने हो : केपी ओली
महाधिवेशनमा कांग्रेस : तीन गुट, गुटभित्रै फुट
भागबन्डा टुंग्याउन कार्यदललाई जिम्मा : मन्त्रालयको संख्या कुन दलले कति लिने ?
नेकपा एमालेका नेता देशव्यापी दौडाहामा
आजदेखि दशैं तिहार लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा : कुनमा कति छुट ?
बुद्धभुमि हाईड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड
काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै एकीकृत समाजवादी
आजको मौसम पूर्वानुमान : कहाँ-कहाँ छ भारी वर्षाको सम्भावना ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो कर्मचारी